Dog Leash ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူများ တရုတ်ခွေး Leash စက်ရုံ
Bungee အပိုခွေး Leash
၁။ အပို Bungee ထုတ်ယူနိုင်သောခွေး Leash ၏အိတ်သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသော ABS + TPR ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးမတော်တဆကျဆင်းခြင်းကြောင့်အမှုကွဲခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
2. ပြန်လည်ဖြုတ်နိုင်သောခွေး leash အတွက် bungee leash ထပ်ထည့်ပါ။ ခန်ဓာကိုယ်နှင့်တက်ကြွသောခွေးများနှင့်အတူအသုံးပြုသောအခါထူးခြားသော bungee ဒီဇိုင်းသည်လျင်မြန်စွာလှုပ်ရှားသွားလာမှုကိုထိတ်လန့်စေသည်။ သင့်ခွေးရုတ်တရက်အနားယူသွားသောအခါသင်အရိုးကိုထိခိုက်စေနိုင်သောထိတ်လန့်မှုကိုမခံစားရပါ။ ၎င်းအစား elastic leash ၏ bungee အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်သင်၏လက်မောင်းနှင့်ပခုံးပေါ်တွင်သက်ရောက်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
3. ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သော leash ၏အရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းမှာနွေ ဦး ဖြစ်သည်။ Bungee ပြန်လည်ဆွဲယူနိုင်သောခွေး Leash သည်အကြိမ် ၅၀,၀၀၀ အထိချောချောမွေ့မွေ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာရန်အားကြီးသောနွေ ဦး လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ။ ခွေးကြီးများ၊ အလတ်စားနှင့်သေးငယ်သည့်မျိုးဆက်များအတွက်သင့်တော်သည်။
4. အပို Bungee ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ခွေး Leash တွင် 360 ရှိသည်° ရှုပ်ထွေးမှုမရှိသည့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် leash သည်သင်၏အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များကိုလွတ်လပ်စွာသွားလာနိုင်ပြီးသင်ကိုယ်တိုင် ဦး ဆောင်။ မရပါ။
ဤဓလေ့ထုံးတမ်းများမှပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်သောခွေး leash ၏ပြင်းထန်သောအတွင်းပိုင်းနွေ ဦး သည်လုံ့လရှိသည့်ခွေးများကိုပေါင် ၁၁၀ အထိအလွယ်တကူကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
၁။ Heavy Duty Retractable Dog Leash ၏အမှုအား ABS + TPR ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးမတော်တဆကျဆင်းခြင်းဖြင့်အမှုကွဲခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
၂။ ဤပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်သော leash သည် 5mm အထိတိုးချဲ့နိုင်သောရောင်ပြန်နိုင်လွန်နိုင်သည့်တိပ်ဖြင့်ယူဆောင်သွားသည်။ ညအချိန်တွင်သင်၏ခွေးကိုအလုပ်လုပ်သောအခါပိုမိုလုံခြုံမှုရှိလိမ့်မည်။
3. Heavy Duty Retractable Dog Leash သည်အကြိမ် ၅၀,၀၀၀ အထိချောချောမွေ့မွေ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာရန်အားကြီးသောနွေ ဦး လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ။ ခွေးကြီးများ၊ အလတ်စားနှင့်သေးငယ်သည့်ခွေးများအတွက်သင့်တော်သည်။
4. Heavy Duty Retractable Dog Leash တွင် 360 ရှိသည်° ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိသောအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် leash သည်သင်၏အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များကိုပိုမိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးပြီးသင်ကိုယ်တိုင် ဦး ဆောင်။ မရပါ။
ပြန်လည်ရောင်းချနိုင်သောခွေး leash ကိုနိုင်လွန်ကြိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးခွေးနှင့်ကြောင်များကအလေးချိန် ၄၄ ပေါင်အထိဆွဲနိုင်သည်။
ပြန်လည်ရောင်းချနိုင်သောခွေး leash သည် ၃ မီတာအထိတိုးချဲ့နိုင်သည်။ ဆွဲအားသည် ၁၁၀ ပေါင်အထိခံနိုင်သည်။
ဤလက်ကားကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်သောခွေး leash သည် Ergonomics လက်ကိုင်ဒီဇိုင်းရှိပြီးနှစ်ရှည်လမ်းလျှောက်ခြင်းကိုသက်သာစေသည်။ အပြင်က''ပေါ့ပါးပြီးချောချောမွေ့မွေ့မဟုတ်သောကြောင့်ကြာမြင့်စွာလမ်းလျှောက်ပြီးနောက်သင်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်လောင်ကျွမ်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ခွေးငယ်များအတွက်ပြန်လည်ဆွဲယူနိုင်သော Leash ၏ပစ္စည်းသည်ဂေဟစနစ်နှင့် ပတ်သတ်၍ အဆိပ်အတောက်ကင်းကင်းနှင့်အနံ့ကင်းသည်။ leash သည်အသုံးပြုရန်တာရှည်ခံသည်။ ခိုင်ခံ့သော High-End နွေ ဦး သည် leash ကိုချဲ့ထွင်ပြီးချောမွေ့စေသည်။
2.Durable ABS အဖုံးသည်ရှုပ်ထွေးသောချုပ်ကိုင်ထားမှုနှင့်ဆန့်ကျင်သောလက်ကိုင်လက်ကိုင်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အလွန်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးလက်ဖဝါးကဲ့သို့သင့်လက်များကိုလက်အိတ်ကဲ့သို့သင့်တော်ပါသည်။ ခွေးငယ်များအတွက်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်သော leash ၏ anti-slip ဒီဇိုင်းသည်လုံခြုံမှုရှိစေပြီးအရာရာကိုအမြဲတမ်းထိန်းချုပ်ထားနိုင်သည်။ 3. ကြံ့ခိုင်သတ္တုဒြပ်ဆွဲအားချိတ်သည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏ကော်လာသို့မဟုတ်ကြိုးကိုလုံလုံခြုံခြုံကပ်ထားသည်။
၁။ ဆွဲယူနိုင်သောဆွဲကြိုးသည်ကျယ်ပြန့်သောပြားချပ်ချပ်ကြိုးဖြစ်သည်။ ဒီဒီဇိုင်းကသင့်ကိုကြိုးကိုချောချောမွေ့မွေ့ပြန်လည်စေပြီးခွေး leash ကိုအကွေ့အကောက်များသော၊ ထို့အပြင်ဤဒီဇိုင်းသည်ကြိုး၏သက်ရောက်သောincreaseရိယာကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်၊ ဆွဲအားကြိုးအားပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရစေပြီးဆွဲအားကိုပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိစေပြီးသင်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
၂.၃၆၀ °ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိသောအကောက်ခွန်ကင်းရှင်းသည့်ခေါက်သိမ်းနိုင်သောခွေး leash သည်ကြိုး၏ချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပြavoidနာများကိုရှောင်ရှားရင်းခွေးအားလွတ်လပ်စွာလည်ပတ်စေနိုင်သည်။ ချုပ်ကိုင်ထားသည့်ချုပ်ကိုင်ထားမှုနှင့်ဆန့်ကျင်သောလက်ကိုင်သည်သက်တောင့်သက်သာခံစားမှုကိုပေးသည်။
လက်ကိုင်ပေါ်ရှိပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်အိတ် ၁ လုံးနှင့်အလင်းရောင်သယ်ဆောင်နိုင်သော poop စွန့်ပစ်အိတ်စွန့်စက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာလက် - အခမဲ့နှင့်အဆင်ပြေသည်။ လမ်းလျှောက်ရတာပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။